လက်သည်းနီဆိုးထားတဲ့အခါတိုင်း တောက်ပရွှန်းစိုနေရတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ | CosmeticMyanmar
Home » Article » လက်သည်းနီဆိုးထားတဲ့အခါတိုင်း တောက်ပရွှန်းစိုနေရတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ
လက်သည်းနီဆိုးရတာကို မိန်းကလေးအများစုက ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ လက်သည်းရှည်ရှည်တိုတို လက်ကလေးက အရောင်လေးတွေနဲ့ဆိုရင်အမြင်လည်းဆန်းစေသလို ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိစေပါတယ်။ ပြီးတော့ဆိုင်မှာဆိုးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြသလို အိမ်မှာတင်ဆိုးကြတဲ့ သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ ကဲပြောချင်တာက အခုမှစမှာပါ။ ဆိုင်တွေမှာ လက်သည်းနီဆိုးရင် base coat, top coat တွေဆိုပြီး ပြောသံကြားဖူးပြီး အိမ်မှာဆိုးတော့ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ မသိတဲ့သူတွေကို ရှင်းပြပေးမှာပါ။
Base Coat ဆိုတာဘာလဲ?
base ဆိုတဲ့ နာမည်လေးအတိုင်း ပထမဆုံးဆိုးပေးရတာပါ။ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ ဘာအရောင်မှမဆိုးခင် ဆိုးပေးရမှာပါ။ လက်သည်းကို coating တစ်ထပ်တင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ လက်သည်းဆိုးဆေးတွေ လက်သည်းကို တိုက်ရိုက်မထိအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။
လက်သည်းကိုအားဖြည့်ပေးပြီး ကျိုးတာတို့ပဲ့တာစတဲ့လက်သည်းအားနည်းတာတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်။ လက်သည်းပန်းခုံးလေးတွေလက်သည်းဆိုးဆေးကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိအောင် treatment ပေးသလိုမျိုးပါပဲ။ ပြီးရင် base coat ဆိုးပြီးမှ လက်သည်းဆိုးဆေးဆိုးတဲ့အခါ ဆိုးရတာ ချောပြီးတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ သတိထားစရာတစ်ခုကတော့ base coat ခြောက်မှ color ကိုဆိုးပေးရမှာပါ။
Top coat ဆိုတာကရောဘာလဲ?
Top coat ကတော့ လက်သည်းအရောင်ဆိုးပြီးရင် အပေါ်ဆုံးကနေဆိုးပေးရတာပါ။ လက်သည်းဆိုးဆေးကြာရှည်ခံအောင်တစ်ထပ်ခံထားတဲ့သဘောပါပဲ။ Top coat မပါဘဲ ဆိုးလိုက်ရင် လက်သည်းဆိုးဆေးက အလွယ်တကူအရောင်ပျက်သွားနိုင်ပြီး တောက်ပမှုသိပ်မရှိနိုင်လို့ပါ။
Top coat ဆိုးလိုက်ရင် လက်သည်းကာလာက ပိုပြီးတောက်လာနိုင်စေပါတယ်။ Top coat မခံဘဲ ဆိုးလိုက်ရင် အရောင်ထွက်မလှဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးသိပ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ အရောင်ဆိုးပြီးသွားရင် top coat ဆိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးခြောက်တာမြန်စေပါတယ်။
ကဲ အလွယ်မှတ်ထားရရင်တော့ Base coat 👉 Color 👉Top coat ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။